Profile Company - Ningbo Health qabriga maryo Co., Ltd.
Wac Taageer 0086-13586821262
Alaabada ka hortagga cudurada faafa
Taxanaha Imaanshaha New
Shaxda Maro Taxanaha
Shirkadda Our waxaa la aasaasay sanadkii 2006, waxa uu ku yaalaa Chinese Port City ------ Ningbo. From ay aasaaska ayaa ka go'an in horumarinta iyo iibinta dharka guriga. Waxa aanu leenahay line-soo-saarka iyo shaqaalaha samaynaysaa cut iyo pack.
Muddo sanado ah ganacsiga shirkadda ee muujiyeen horumarka wanaagsan, sumcad wanaagsan ee macaamiisha ah, shirkadda ayaa had iyo jeer ruuxa "macaamiisha ugu horeysay, adeegga ugu horeysay" ujeedada, focus on baahida suuqa, fiiri fog ka hor mustaqbalka, abuuranto qiyam macaamiisha iyo nafteena.
waxyaabaha ugu weyn ee shirkadda ayaa daah, Barkimo, bustayaal, waxyaabaha sariirta, iwm. Haatan waa inaan formula caafimaadka in ay soo saaraan waxyaabaha Healthy. wax soo saarka ayaa loo dhoofiyo dalalka iyo gobollada badan, oo ku adkeeyey muddada dheer xiriirka iskaashi oo macaamiisha badan. Shirkadda mar kasta u hoggaansamaan siiyaan macaamiisha waxyaabaha soo jiidasho iyo adeegyada, tayada uga wanaagsan inuu ku guuleysto iibka oo xiiso leh iyo wanaag macaamiisha in ay suuqa.
Shirkadda ayaa aaminsan in la dhismaha joogtada ah ee kooxda, horumar joogto ah shirkadaha, macaamiisha taageero si ay u abuuraan mustaqbal wanaagsan!
Cinwaankaaga: # 27, Hengfeng Rd, Easten Developed Area, Fenghua, Ningbo
Xuquuqda daabacaadda - 2010-2020: Dhammaan Xuquuqda Aad ayaa Leedahay. - Hot Products - Sitemap - amp Mobile
Baby tuujin, laalaab , Suede , Car Kursiga barkin , Print barkin , Daabacaadda sheer , barkin ,